NGABA UNGANIKELA NGEGAZI UKUBA UNETATTOO-UKUNIKELA NGE-INK - UHLOBO
Ngaba Unganikela Ngegazi Ukuba UneTattoo-Ukunikela Nge-Ink
Kule mihla yobudala, yeyiphi indoda engenayo itattoo enye?
Nangona kunjalo, ukuba unomdla wokunikela ngegazi kwaye unayo okanye enye iitatoo, nantsi yonke into ekufuneka uyazi ngaphambi kokuhamba ngenkqubo yomnikelo.
Ngaba Unganikela Ngegazi NgeTattoo?
Impendulo emfutshane yile: Ewe.
Ngethuba nje uhlangabezana nazo zonke ezinye iimfuno zokunikela ngegazi, into elula njenge tattoo ayiyi kukubamba ekwenzeni oko.
Nokuba unayo tattoo encinci ifihliwe ndaweni ithile ilanga alikhanyisi, okanye zigutyungelwe entloko kuzwane kwimizobo eneenkcukacha, awubanjwanga ukuba uye phambili ngokunikela ngegazi.
iimpahla ezinebhatyi emnyama yejean
Phambi kokuba usete ixesha lokunikela ngegazi okanye ukuya kumsitho wokunikela, qiniseka ukuba uyahlangabezana nazo zonke ezinye iimfuno zokunikela ngegazi. Ngelishwa, zininzi ezinye iimfuno zokuhlangabezana nazo ngaphambi kokuba unikele ngeplasma yakho kwisizathu esikhulu. Ukuqinisekisa ukuba uyadibana nayo yonke le migangatho iphambeneyo, jonga le linki inoluhlu olupheleleyo lweemfuno.
Yintoni ekufuneka uyazi malunga nokunikela ngeTattoo?
Ngelixa impendulo emfutshane ukuba unganikela ngegazi ngetattoo ewe, kukho iibhokisi ezimbalwa ekufuneka uzijongile kuqala.
Iifakhalthi zeTattoo ziza ngazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ngelixa oku kuhle kakhulu ngenxa yeendidi ezibonelelweyo, ngelishwa ezinye zeFattoo zeFakhalthi azilawulwa. Ukungalawulwa kuthetha ukuba urhulumente akazukundwendwela ezona ndawo kanye aqiniseke ukuba zonke izixhobo kunye neenkqubo zikhuselekile kwaye zicocekile.
Okwangoku ngeli xesha, uninzi lwamazwe ase-US alawula iiFakhalthi zeTattoo. Ukuba imeko ohlala kuyo iyazilawula iiFakhalthi zeTattoo, yiyo loo nto-ugqibile! Qhubeka unikele. Nangona kunjalo, ukuba ilizwe lakho alinayo imigaqo-nkqubo yommiselo yeeFakhalthi zeTattoo, ke kuya kufuneka uzalisekise amabanga emfundo ukuze uqhubeke ngenkqubo yomnikelo.
Amazwe angezantsi awazilawuli iiFakhalthi zeTattoo:
- INew Hampshire
- Inew York
Ke ilizwe lakho alilawuli… Yintoni elandelayo?
Ngethamsanqa, ayisosiphelo sehlabathi ukuba ilizwe ohlala kulo alilawuli iiFakhalthi zabo zeTattoo! Ngelixa wena ngokwakho unokufuna ukumisela ukuba uziva unentembelo yokufumana i-tat yakho entsha isetyenziswe kwindawo engalawulwa nangayiphi na indlela ngurhulumente, umnikelo wakho wegazi uya kwamkelwa ukuba ulandela izikhokelo ezimbalwa ezilula.
Ngokubanzi, kukho umthetho omnye ekufuneka ulandelwe ukuba ufumene ii-tato nakweyiphi na le mimandla emamele apha ngasentla. Ukuba nayiphi na eyakho Iitattoo ezimangalisayo zisetyenziswe kwimeko engazilawuliyo iZibonelelo zeTattoo, ke kuya kufuneka ulinde iinyanga ezili-12 ngaphambi kokuba unikezele ngegazi.
Nje ukuba ulinde iinyanga ezili-12 ngomzimba wakho wobugcisa, unganikezela ngokusesikweni ngegazi- nokuba ungawabeka kweliphi na itatoo!
Kutheni kufuneka ulinde iinyanga ezili-12?
Ukulinda iinyanga ezili-12 ngaphambi kokunikela ngegazi kunokubonakala kunzima, kodwa lo mthetho ukhona ngezizathu ezivakalayo.
Esona sizathu siphambili ngeli xesha lokulinda ngumngcipheko wokuba ne-hepatitis ingene kumjelo wegazi. IHepatitis sisifo esoyikekayo esihlala kumjelo wegazi kwaye siyosulela kakhulu. Ukuba esi sifo sihlala egazini lakho, ukunikela ngaso nasiphi na isixa kuya kuchaphazela nabani na odibana naso.
Eli xesha lokulinda alikho enye into njengokuthintela ukhuseleko. Ukuba iZiko leTattoo olifumeneyo umzobo wakho kubangele ukuba igazi lakho lidibane ne-hepatitis, imiqondiso iya kube icacisiwe kwithuba leenyanga ezili-12. Ukuba konke kulungile emva kweenyanga ezili-12, unokuqiniseka ukuba awuzange udibane ne-hepatitis ngelixa ufumana ithambo lakho.
Unokufumana njani i-Hepatitis kwi-Inch?
Xa iZiko leTattoo lingalawulwa ngurhulumente, izinto ezininzi zenkqubo zinokungahambi kakuhle. Xa urhulumente elawula izixhobo zeTattoo, bayalela ukuba kusetyenziswe iinaliti ezingenazintsholongwane kwinkqubo yokwenza umvambo. Lo mmiselo uqinisekisa ukuba i-inki yomvambo ayisetyenziswanga kwakhona phakathi kwabathengi.
I tattoo yomkhono wesiqingatha sabasetyhini
Ngelixa kubonakala ngathi zonke izixhobo zeTattoo kufuneka zilandele ezi nkqubo, ezinye azenzi njalo. Ukuphinda usebenzise inki kumthengi omnye ukuya kwelinye kuthetha ukuba imali inokugcinwa. Ukusetyenziswa kweenaliti ezingenazintsholongwane konga ixesha kunye nemali.
Ukuba umntu one-hepatitis ufumana umvambo kwindawo engalawulwa ngurhulumente, inaliti okanye i-inki esetyenzisiweyo kwimifanekiso yabo inokusetyenziswa kumthengi olandelayo. Ukuba kunjalo, kunokwenzeka ukuba umntu onelishwa abe nesifo se-hepatitis ngokwabo.
Ngale nto ithethwayo:
Ngaphambi kokufumana ubugcisa bakho obulandelayo, qiniseka ukuba indawo yokubhalela umvambo ulawulwa ngurhulumente.
Kungenxa yokuba ufumana umvambo kwelinye lamazwe angalawulwayo akuthethi ukuba abazisebenzisi iinaliti ezingenazintsholongwane, kwaye oko akuthethi ukuba bahlala beyisebenzisa kwakhona i-inki yabo. Ukuba ucwangcisa ukufumana i-tat kwimeko engalawulwa, qiniseka ukuba uthatha ixesha ukubuza malunga neenkqubo kunye neenkqubo zabo.
Iindaba ezimnandi zezokuba, uninzi lwamazwe luyazilawula ii-parlours zabo. Nokuba umvambo owongeze kwingqokelela yakho wawenziwe ngobuso kwindawo engalawulwa, nje ukuba kudlule iinyanga ezili-12 ungaziva ukhululekile ukunikela ngegazi elininzi ngendlela othanda ngayo.
Iitattoos ezincinci zase-Egypt zamabhinqa
Uyilo lwangaphakathi | Iindonga zomthi
Igumbi lokuhlala lasefama elinendawo yokubasa umlilo
thina bantu sihlaba iflegi